Schizophrenia လေးနက်နေတဲ့စိတ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်ကမ္ဘာကြီးကိုမြင်လမ်းနှင့်သင်ပြုမူလမ်းကိုသာသက်ရောက်သည်.
Schizophrenia သင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်သင်မည်သို့ကမ္ဘာကြီးကိုတွေ့မြင်ကိုပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာ schizophrenia ကခက်ခဲသင်ထိန်းချုပ်သင်တို့၏အကြံအစည်စောင့်ရှောက်ဖို့စေသည်စေသည်. သငျသညျ schizophrenia ရှိပါကသင်ကသင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်ခံစားချက်များကိုနှင့်မည်သို့ပြုမူဖို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်. သူတို့ schizophrenic ငယ်ရွယ်အခါလူအများစုဟာ get.
သငျသညျ schizophrenia တစ်ဦးရောဂါဖြစ်ပါသည်ရှိပါကသင်ပိုင်ဆိုင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ကို:
သင်ကကောင်းစွာမဖြစ်သည့်အခါတစ်ခုခုကိုမှန်ကန်သည်ဟုမထင်ရသောအခါထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီး. ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လူတိုင်းကိုသင်နှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေကြောင်းထင်နှင့်အသင်တို့ကိုမုန်း. ဤသူသည်သင်တို့ဦးနှောက်အာရုံကြောသို့မဟုတ်စိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်. အမှန်တရားကလူကိုချစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမသင်နှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေကြောင်းပါလျှင်ဤသည်လှညျ့ဖြစ်ပါသည်.
အမှုအရာဖြစ်ပေါ်ပါဘူးသည့်အခါစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ. တယောက်မျှမရှိသည့်အခါဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျအသံကွားနိုငျ. သငျသညျရှိနေကြသည်မဟုတ်သောအရာတွေ့နိုင်ပါသည်. သငျသညျ၌နေကြသည်မဟုတ်သောအရာအရသာသို့မဟုတ်အနံ့နိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားအတွေ့အကြုံများသင်တို့အဘို့အလွန်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း.
သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမပြကြဘူးလာသောအခါစိတ်ခံစားမှုမှုန်ဝါးများမှာ. သငျသညျတော့ဘူးမျက်စိရှိလူများကိုကြည့်မပြုစေခြင်းငှါ. သငျသညျအလွန်နှေးကွေးစွာနဲ့ခံစားခကျြမရှိဘဲစကားပြောနိုင်မည်အကြောင်း. သင်န်းကျင်အပေါ်သွားအရာကိုမသိလျှင်အဖြစ်စိတ်ခံစားမှုမှုန်ဝါးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. သင်ကအခြေအနေပုံမှန်ခံစားချက်တွေကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုစိတ်ခံစားမှုဖျောပွနိုငျ. ဥပမာအားဖြင့်, သင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကအလွန်ဝမ်းနည်းသောဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကိုပြောပြ. သငျသညျဝမ်းနည်းမှု၏အတိုင်းအတာသင်၏အဆွေခင်ပွန်းနားမလည်ဘူးနှင့်သင်ရယ်မော.
Schizophrenia အရာများစွာကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်. သငျသညျ schizophrenia ရှိစေခြင်းငှါအကြောင်းရင်းအချို့မှာ:
မျိုးဗီဇစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာများမှာ (ထိုသို့သောမျက်စိအရောင်အဖြစ်) သင်သည်သင်၏မိဘများထံမှရ. ဒီတစ်ခါလည်းသင့်မိသားစုအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကို schizophrenia ရှိပါတယ်.
ဇီဝဗေဒကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်. သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်အတွက်အပြောင်းအလဲများကလွယ်ကူဒဏ်ရာ schizophrenic စေနိုင်သည်များရှိနိုင်ပါသည်. schizophrenia ယောက်ျားပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်.
မူးယစ်ဆေးတွေအများကြီး schizophrenia ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုသုံးပါ.
လူအများစုဟာအကြား schizophrenia များ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားနေရ 16 နှင့် 30 ခုနှစ်. ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်နာမကျန်းမှုကြောင့်ရှိသည်သောခံစားချက်များကိုနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုများမှာ. ပြီးနောက် schizophrenia နှင့်အတူလူအများကြီးရမနေပါနဲ့ 45 ခုနှစ်. ကိုယ်ကသာ schizophrenia ကုသမှုဆက်ဆံဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ. သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်ဆေးကိုယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.